FAALLO – Puntland: Xil ka-qaadis itus oo itaabsii ah! | HalQaran.com
Home Opinion FAALLO – Puntland: Xil ka-qaadis itus oo itaabsii ah!
FAALLO – Puntland: Xil ka-qaadis itus oo itaabsii ah!
Guddoomiyihii Baarlamaanka Puntland ee Xilka laga qaaday, Mudane Cabdixakiim Dhoobo Daareed
FAALLO (Halqaran.com) – Puntland khilaafkii siyaasadeed ayaa isu rogay gacan ka hadal. Ciidamada Boliiska Puntland ayaa weerar ku qaaday Xarunta Baarlamaanka Puntland. Inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay afar ruux, sidoo kale, waxaa ku dhawaacmay dhacdadaas shan ruux oo kale.
Ciidamada Boliiska Puntland
Puntland khilaafkii siyaasadeed